Astaanta Tufaaxa “Apple Computer Co” - Land Of Punt
Shirkada “Apple” ee samaysa agabka isgaadhsiinta siiba teleefonada waxaa astaan u ah tufaax “Apple” dhinac laga hudhay. Ka hor intaanay shirkadu astaan qaadan waxaa lagu yaqaanay oo calamad u ahayd saanisyankii caanka ahaa “Sir Isaac Newton” oo hoost fadhiya geed weyn oo tufaaxa. Waxaa kaloo geedka saraan mas. Isaac Newton waxaa loo nisbeeya inuu alifay amse helay falaadh laydhka/cadceeda ee looyaqaan “Prisma”. Prisma waa kaladhada kala falaadha cadceedo samayso. Wakhti danbe ayaa shirkada “Apple” laga badalay inuu sii ahaado Sir Isaac Newton waxaan loo badalay oo lagu soo ururiyey in midhaaha geed astaan looga dhigoo oo ah tufaax dhinac midig jaran.
Hadii aynu iskataagno dhinaca cilmiga turjumida astaamaha “SYMBOLISM”, habayaraate wax isbadal ah oo ay sameeyen majirto markan ay Sir Isaac Newton ku badalayaan midhaha tufaaxa. Diimaha dunida kajira siiba kiristanka waxaa laga aaminsan geed midhihiis Nabi Adam lasiiyey oo kulankii dhexmaray Adam iyo Ibliis geed hoostii ahaa. Geedan lagu shiray ee kulanku ka dhacay waa geed tufaax ah waana geedka midhihiisa lasiiyey Xawo iyo Adam. Geedkan uu Sir Isaac Newton hoos fadhiya wuxuu utaagan yahay isla geedka balaysan ee laga mamnuucay Adam cs inaanu cunin halka maska ku mareersan ee dusha kasoo eegaya Sir Isaac Newton loola jeedo Ibliis. Kutubta ay akhristaan nimankan wadada khaldan raacay ayuu ku qoranyahay geedkanu waxayna yidhaahdan oo uyaqaanan inuu yahay geedka cilmiga,wanaaga iyo xumaanta ‘Tree of knowledge of good and evil’.
Shirkada Apple, PRISMA & Sir Isaac Newton
Astaanta shirkada Apple mid hore iyo mid danbe waxay inoo tilmmamayaan inaan astaanta layska samayn lakinse dad hadaf iyo ujeedokale leh inay abuuren shirkada iyo calaamda looyaqaan. Fariinta kujirta ee ay inoo sheegayaan ragan alifay shirkada iyo astaanteedaba in mashruuci Ibliis jannad kagasoo saaray Adam jiro oo waliba uu ku guuleystay. Waxay kaloo inoo sheegayan in cilmigii uu Ibliis ku doodayey ee ku lahaa Adam waxaa lagaa qarinayaa cilmi aniguna cilmigaas ayaan kuu furayaa. Shirkada Apple waxay ka turjumay oo cadayn utahay oo ilmo Adam (bini’adam) loo sheegaya cilmigii Ibliis sheegayey iyo horumarkii uu lahaa waa laydinka qariyey ufuray. Shirkada casriga ah oo ahayd inay ku dhisnaato falsafada dimoqraadiyada/culmaaniyada ee aan diinba meel kasoo gelin maxaa ugeeyey oo sidadban loogu soo qaadanaya arinka dhexmaraya maraya Adam iyo Ibliis. Waa inaan la fududaysan oo dhindhokale lagu eega ujeedoyinka ku qarsoon calaamdaha maalinkasta aynu aragno. Waxaan leeyahay baroortu orgiga ka weyn.
apple Apple logo astaanta shirkada apple astaanta tufaaxa Iluminaatiga Ilumunati MAS telefoon ururada hadafka qarsoon leh